गितारिस्ट सन्जीव बराइलीलाई गितारबारे २० प्रश्न
काठमाडौं– सहरमा गितार प्रेमी तथा गीतहरु सुन्न मन पराउने पुस्ताले पक्कै पनि सन्जीव बराइलीको नाम सुनेको हुनुपर्छ । उनी अहिलेका सबैभन्दा चलेका गितारिस्ट हुन् । झन्डै १५ सय गीतमा आफ्नो गितारको जादू देखाइसकेका सन्जीवसँग फरक धारका कमल विष्टले गितारमा मात्र केन्द्रित रहेर केही प्रश्न सोधेका छन् । ती प्रश्नको उत्तर सन्जीवले दिएका छन्—
पहिलो पटक गितार कति वर्षको हुँदा बजाउनु भयो ?
त्यस्तै ८ वर्षको थिएँ होला ।
त्यति बेला कोबाट प्रेरित भएर गितार बजाउनु भयो ?
म त्योबेला झापामा पढ्थेँ । मेरो एकजना नजिकका नातेदार र साथी थियो किरण रसाइली । ऊ म भन्दा एक वर्ष कान्छो थियो । उसलाई मैले स्कुलमा र उसकै घरमा गितार बजाएको देखेको थिएँ । ऊ राम्रो गितार बजाउथ्यो । उसले बजाएको देख्दा मैले पनि सिक्न पाए त राम्रो बजाउन सक्थे हुँला भन्ने लाग्यो । मलाई पनि गितार सिकाउन उसलाई अनुरोध गरेँ । स्कुलमा गितार सिक्ने त्यति फुर्सद हुँदैनथ्यो । म उसकै घरमा गएर गितार सिक्न थालेँ ।
पहिलोपटक कहिले गितार किन्नुभयो ?
म किरणसँग गीतर सिकिरहेको बेला मसँग आफ्नै गितार थिएन । मैले पहिल्यैदेखि गितार किनिदिनु भनेर घरमा भनिरहेको थिएँ । तर, घरको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो थिएन । पछि म बिरामी परेँ । त्यति बेला मैले गितार नपाएसम्म अस्पताल नै जान्नँ भनेर ढिपी गरेँ । त्यही कारणले बुबाले सेकेन्ड ह्यान्ड गितार ल्याइदिनुभयो । अनि मलाई गितार सिक्ने कक्षामा पनि भर्ना गरिदिनुभयो ।
पहिलोपटक गितार कुन कार्यक्रम वा स्टेजमा बजाउनु भयो ?
स्कुलका कार्यक्रमहरुमा बजाइरहेकै हुन्थेँ । ८–९ क्लासमा पढ्दा हामी केही साथीहरु मिलेर ‘पिस’ भन्ने व्याण्ड नै खोलेका थियौ । जे होस् हामी कन्सर्टहरु गरिरहकै हुन्थ्यौ । अहिले उनीहरु कहाँ छन् के गरिरहेका छन् भन्ने चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन ।
गितार कसरी सिक्नुभयो, सुरुमा कुन ‘कर्ड’ सिक्नुभयो ?
मलाई ठ्याक्कै याद त छैन । ‘ए’ हो कि जस्तो लाग्छ । किन भने त्यो कर्ड अरुभन्दा तुलनात्मक रुपमा सजिलो हुन्छ । एउटै बारभित्र सबै औला राख्न मिल्ने भएकाले पनि ।
सबैभन्दा मन पर्ने ‘कर्ड’ ?
त्यो त मुडमा भर पर्छ । तर मलाई आफू जस्तो मुडमा भए पनि ‘इ कर्ड’ सधैं मन पर्छ । इ मेजर बजाउँदा झ्याम्मै मनमा एउटा फरक भाइव उत्पन्न हुन्छ । शान्त तलाउमा बिस्तारै ढुङ्गा हान्दा जसरी छालहरु तरङ्गित हुन्छन्, त्यस्तै भाव उत्पन्न हुन्छ मनमा पनि इ मेजर प्ले हुँदा ।
सबैभन्दा मन पर्ने ‘बिट’ ?
थ्री बाइ फोर ।
तपाईंलाई सबैभन्दा मन पर्ने गितारिस्ट कोको हुन् ?
धेरै छन् । एन्गुस योङ, स्टिभ मोर्स, एरिक जोनसन, एण्डी टिमोरलगायत ।
के मन पर्छ ‘एन्गुस योङ’ को ?
उनको गितार बजाउने शैली भिन्न र रमाइलो खालको छ ।
तपाईंलाई कुन ब्रान्डको गितार मनपर्छ ?
यो त गितारको नेचरले निर्धारण गर्छ । इलेक्ट्रिकमा पिआरएस, फेन्डर कम्पनीको मन पर्छ, एकोस्टिकमा टेलर मन पर्छ । अरु पनि छन् मन पर्ने ब्राण्डहरु ।
अहिले तपाईंसँग कतिवटा गितार छन् ?
धेरै थिए । कति बिग्रिएर गए, कति साथीलाई दिएँ । अहिले त दसवटा छन् ।
सबैभन्दा महङ्गो गितार कति मूल्यको छ ?
अढाई लाख । तर, अब अहिले त्यसले पनि पुगिरहेको छैन ।
आफैले कमाएर सबैभन्दा महंगो गितार कुन किन्नुभयो ? कहिले ? कति पैसाको ?
मैले आफ्नै पैसाले किनेको पहिलो गितार पनि सेकेन्ड ह्याण्ड नै थियो । एसएलसीपछि म बाबाआमासँग पढ्न काठमाडौं आएँ । ०६४ सालमा मैले एकजना सँग सात सयमा गितार किनेँ । त्यो गितारको अवस्था साह्रै नराम्रो थियो । त्यसको बार निकै माथि उठेको थियो । त्यति बेला मलाई राम्रा गितारबारे नै थाहा थिएन । त्यही वर्ष मैले अर्को पनि गितार किनेँ, ४८०० रुपैयाँको ।
काठमाडौंमा पहिलो पटक गितार बजार पर्फमेन्स कहाँ गर्नुभयो ?
काठमाडौं आएकै साल मैले नेपाल पर्यटन बोर्डमा एउटा कार्यक्रममा बजाउन पाएँ । त्यो विश्व संगीत दिवसको दिन थियो । मलाई आयोजकले एउटा खाम दिनुभएको थियो, त्यसमा पाँच सय रुपैयाँ रहेछ । त्यो नै मेरो जीवनको पहिलो कमाइ हो, गितार बजाएर कमाएको ।
साथीभाइहरुले पनि गितार गिफ्ट गर्छन् ?
हो, गर्नुहुन्छ । केहीअघि मेरो बर्थडेमा पनि एउटा गितार नै गिफ्ट आएको थियो ।
तपाईं चाहिँ कसैलाई गितार गिफ्ट गर्नुहुन्न ?
अहिलेसम्म दिएको छैन ।
गितारसँगै जोडिएको कुनै त्यस्तो घटना छ, जसले गर्दा तपाईंको मनमुटाव भएको होस् ?
छैन त्यस्तो त ।
गितारकै कारणले कहिल्यै रुनु भएको छ ?
छु । सानोमै पहिलो पटक बाबाले गितार नकिनिदिँदा रोएको थिएँ ।
निरन्तर कति लामो समय गितार बजाउनु भएको छ ?
बाह्र घण्टासम्म । म बजाउन थालेपछि सबै कुरा बिर्सिएर बजाउँछु ।
गितार के हो तपाईंका लागि ?
सबैथोक, जीवन ।
गितार बजाउनु के हो तपाईंका लागि ?
आफैलाई भुल्नु हो । म गितार बजाउदा सबै कुरा भुल्छु । आफैलाई पनि ।